Al-Shabaab oo qirtay in duqeyn lagu burburiyey Idaacadoodii Al-Furqaan | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Al-Shabaab oo qirtay in duqeyn lagu burburiyey Idaacadoodii Al-Furqaan
Faah-faahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqeyn diyaradeed oo xalay ka dhacday deegaanka Kuunyabarow ee gobolka Shabeellada Hoose, taas oo lagu bartilmaameedsaday xarun Idaacadda Al-Shabaab ee Al-Furqaan.
Duqeyntaas oo aheed mid culus ayaa waxaa la soo sheegaaya in ay ka dhasheen khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana fuliyey diyaaradaha aan duliyaha laheyn, kuwaas oo illaa hadda aan la ogaan dalka laga leeyahay.
Al-Shabaab ayaa baraha ay internet-ka ku leeyihiin waxay ku baahiyeen in mid kamid ah diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ay afar Gantaal ku weerartay xaruntii Idaacadda Al-Furqaan ee ku taallay degaanka Kuunya-barroow.
Al-Shabaab waxay sheegeen in duqeyntaas ay waxyeelo ka soo gaartay dad shacab ah. sidoo kalena burbur baahsan uu soo gaaray xaruntii Idaacadooda.
Majirto cid weli sheegatay duqeynta lala beegsaday xarunta Idaacadda Al-Shabaab ee Al-Furqaan ku laheyd deegaanka Kuunya-Barrow, hayeeshe duqeymaha noocaan oo kale ah ayaa waxaa inta badan fuliya diyaaradaha Mareykanka, kuwaas oo taageera siiya ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa Mareykanku tababaray ee kumaandooska Danab.
Al-Shabaab oo qirtay in duqeyn lagu burburiyey Idaacadoodii Al-Furqaan was last modified: January 2nd, 2021 by Admin
Saamayn durba ka dhalatay ka bixitaankii UK ee Midowga Yurub